आज पनि घट्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति पुग्यो ? – Khabar Silo
आज पनि घट्यो अमेरिकी डलरको भाउ, कुन देशको कति पुग्यो ?
काठमाडौँ । आज शनिबार अमेरिकी डलर लगायत अन्य देशको विनिमयदर घटेको छ।अमेरिकी डलर १ को खरिदर मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ १७ पैसा रहेको छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय १३ रुपैयाँ ७७ पैसा छ। त्यस्तै यूरोपियन यूरो १ को खरिदर मूल्य १ सय २५ रुपैयाँ ६२ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य १ सय २६ रुपैयाँ २८ पैसा छ।
त्यस्तै आज अष्ट्रेलियन डलर १ को खरिदर मूल्य ७७ रुपैयाँ ७९ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ७८ रुपैयाँ २० पैसा रहेको छ। आज सिंगापुर डलर १ को खरिदर मूल्य ८२ रुपैयाँ ४४ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ८२ रुपैयाँ ८८ पैसा रहेको छ।आज साउदी अरेवियन रियाल १ को खरिदर मूल्य ३० रुपैयाँ १७ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ३० रुपैयाँ ३३ पैसा रहेको छ। त्यस्तै कतारी रियालको खरिदर मूल्य ३१ रुपैयाँ ८ पैसा छ भने बिक्रिदर मूल्य ३१ रुपैयाँ २५ पैसा रहेको छ।